Khaatuma-xun Xaalkeedu Xagee Marayaa – Rasaasa News
Khaatuma-xun Xaalkeedu Xagee Marayaa
Xiligii asaxaabihii ayaa waxaa jiray nin ka mid ahaa dadkii xiligaas noolaa waxaa uu ninkaasi qodi jiray xabaalaha dadka, wuxuuna mayka qabriga ku jira kala bixi jiray marada Kafanka deedna wuu ka ganacsan jiray.
Muddo ka dib ninkii aad ayuu u xanuunsaday kolkaas ayuu dardaarmay wuxuu yidhi markaan dhinto lafahayga xabaasha ha laga soo saaro hana la gubo oo ha la shiido dambaskana dabaysha ha la raaciyo, ujeedadiisu waxay ahayd in uu Ilaahay ka dhuunto si uusan u ciqaabin waa sida ay isaga la ahayde.
Khaatama-xun waxay doorbidi lahaayeen in ay noqdaan dabayl aan la arkaynin si ay dadka uga dhuuntaan. Way ku adag tahay kooxda Khaatuma-xun in ay dadka ku dhex milmaan, waxayna baryahan bilaabeen munaafaqad aan qarsoomi karin.
Kooxda khaatuma-xun si ay u sii wadaan dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka Somalida Ogadeeniya si ay u sii wadaan xumaantaas waxay oo taageero ka raadsanayaan caruurtii yaryar ee qurbaha ku dhalatey ee waxbarashada ka saaqiday. Waxaa kale oo ay taageero ka raadinayaan haweenka uu guurku u saldhigi waayey ama iyagu balwada leh. Waxaa kale oo ay iyana taageero ka raadsadaan dadka uu mukhaaradaadku ka reebay nolosha, ka dib markii in badan ay dadka been u sheegayeen,beentiina dhamaatey bulshada dhexdeedana ka takoormeen dal iyo dibadba, ayaa waxay bilaabeen arimahan kore.
Dadkan aan soo sheegnay oo ah iyagu aan hormuud ka noqon karin danaha bulshada ayaa waxaa aad u isticmaalaya kooxda Khaatuma-xun oo sida aad magaceedu yahay ah mid mutaqbal ku lahayn akharo iyo aduun toona.
Ilmo caruur ah oo u baahan in dhibaatadiisa la xaliyo oo lagu waaniyo in uu wax barto oo uu waalidkii la noolaado oo xurmeeyo bulshada inteeda kale. Khaatuma-xun waxay ku waanisaa in ay Iskolada ka tagaan oo ayna waalidkooda maqal oo ay music iyo wax shaydaan bartaan si uu u kordho dhibaatada bulshadu [social problems] si ay iyagu uga faa,iidaystaan iyo camulu shaydaanka ay ku jiraan. Waxaa loo baahan yahay in da,ayartu ay wax barato si bari bulshadeena wanaag ugu hogaamiyaan.
Haweenka ay duufsatay kooxda khaatuma-xun, ee iyagu dumiyey raasaskoodii dayacayna ubadkoodii waxaa wanaagsanaan lahayd in ay ogaadaan in ay yihiin aas aaskii bulshada hadii ay hooyadu wanaagsanaato waxaa dhab ah in uu qoysku wanaagsanaan, hadii uu qoysku wanaagsanaadana bulshada oo dhan ayaa wanaagsanaan.
Dadka iyagu muqayiliinta ah ee ay iska soo horaysiiso kooxda khaatuma-xun, bulsho maskaxdeedu caafimaad qabto ayaa wanaag iyo horumar keenta. [haduu Jaad wax tari Jaamac baan jimuhu dhuubteen war ma janaad ku gali waakan oo jiidhki kaamadhiye], ceeb ma ahan in uu ruuxu balwad yeesho waxaase ceeb ah in uu ruuxu garan waayo dhibaataynta bulshada marka laga reebo tiisa.
Waxaa kale oo jirta dad tiro yar oo iyagana ay kooxda khaatuma-xun taageero ka raadsato, waxaa weeye dad yar oo ka mid ah bulshada la gumaysto ee Somalida Kenya. Waxaa wax lala yaabo ah xubnahani ay bulshada Somalida Ogadeeniya ay ugu soo dabo gabanayaan Abti-doon oo isagu aan waxba ka aqoonin ama aan la sheekaysan karin shacabka Somalida Ogadeeniya deedna ay dantu ku kalifayso in uu dad taageera ka soo wato dadka sujuuga ah.
Hadaba waxaana uga digaynaa dhalinyarada Qurbaha ku barbaartay ee aan waxba kala soconin xaalada halganka, haweenka aan iyagu nasiibka u helin in guri dagan helaan, muqayiliinta iyagu dumiyey raasaskoodii iyo dadkan ajnabiga ah ee sita dhalashada dalalka dariska in ay ka gaabsadaan taageerada ay ka doonayso kooxda khaatuma-xun.
Bulshada Somalida Ogadeeniya waxay balan ku gashay in kooxda khaatuma-xun oo iyadu noqotay dambiilayaal halgan dumis ah in lagu ciqaabo meel kasta oo lagula kulmo lana awoodo in lagaga jasaa,isiiyo dunuubta ay halganka ka galeen.
Khaatuma-xun khayaali bay ku jirtaa, shacabkiina ka khoof oo khafisad bay ku jirtaa.
Abdi Gaboobe Agaboobe@kaliil.com
Dab Baabi,iyey Bakhaarka Dawada Isbitaalka Jijiga
Rumayso ama Ha Rumaysan!